ဈေးကွက်တွင်အကောင်းဆုံးတရုတ်စမတ်ဖုန်းများ | Gadget သတင်း
El တရုတ်မိုဘိုင်းဖုန်းစျေးကွက် ၎င်းသည် ဆက်လက်၍ တိုးတက်နေပြီး၊ အံ့မခန်းဖွယ်ကောင်းသောသတ်မှတ်ချက်များနှင့်ဝယ်ယူနိုင်သည့်မိုဘိုင်းထုတ်ကုန်များပိုမိုများပြားလာပြီးအခြေအနေအများစုတွင်စျေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့်ရရှိနိုင်သည်။ ရက်အနည်းငယ်အကြာကျနော်တို့ပြီးသားစာရင်းတစ်ခုဖန်ဆင်းခဲ့သည် ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင်ဈေးကွက်သို့ရောက်ရှိလာသောတရုတ်မိုဘိုင်းဖုန်း ၇ လုံး၊ အဆင်း၊ လှပ၊ စျေးပေါသည်, ဒါပေမယ့်ဒီနေ့ကျနော်တို့တစ် ဦး ခြေလှမ်းထပ်မံသွားချင်တယ်ကျနော်တို့ပြသသွားကြသည် အာရှနိုင်ငံများမှလုပ်သောအကောင်းဆုံးစမတ်ဖုန်းများနှင့်သင်ယနေ့ ၀ ယ်နိုင်သည်.
စင်တာများ၊ Terminal များနှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုသင်မဖတ်မီ၊ ကျွန်ုပ်တို့စျေးနှုန်းချိုသာသောစမတ်ဖုန်းများနှင့်ဆက်ဆံခြင်းမပြုကြောင်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်တရုတ်စျေးကွက်၏အထက်တန်းလွှာအကြောင်းပြောနေခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်၎င်းတို့သည်ပိုမိုမြင့်မားလာလိမ့်မည်ဟုမတိုင်မီသင့်အားသတိပေးရန်ရှိသည်။ အများဆုံးကိစ္စများတွင် 200 ယူရိုကျော်လွန်သောစျေးနှုန်းများ။
သင်၏မိုဘိုင်းဖုန်းကိုပြောင်းလဲရန်သင်စဉ်းစားနေပါကယနေ့ကျွန်ုပ်တို့အဆိုပြုထားသောဤစာရင်းတွင်တရုတ်မှလာသည့်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသောရွေးချယ်စရာအနည်းငယ်ကိုတွေ့လိမ့်မည်။ ၎င်းကိုသင်ကြိုးစားပြီးသည်နှင့်ချက်ချင်းဖမ်းယူလိမ့်မည်။ အဆင်သင့်ပြင်ပါ၊
3 Xiaomi က Mi4
5 ဂုဏ်အသရေ6Plus အား
6 Xiaomi က Redmi 2
ဤစာရင်းတွင်ရှိသည့်ပထမဆုံး terminal သည်အသစ်တစ်ခုဖြစ်သည် OnePlus2ဒီဟာကတရုတ်မှာလုပ်ခဲ့တဲ့အကောင်းဆုံးမိုဘိုင်းပစ္စည်းပဲဖြစ်ပါတယ်၊ အခုကျွန်တော်တို့စျေးကွက်ထဲ ၀ ယ်နိုင်တယ်။ ကံမကောင်းစွာဖြင့်ပထမဗားရှင်းတွင်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည့်အတိုင်း၊ အချို့သောအွန်လိုင်းစတိုးဆိုင်များသည်၎င်းကိုလွတ်လပ်စွာရောင်း ၀ ယ်ရန်စတင်နေပြီဖြစ်သော်လည်း၎င်းကိုဖိတ်ကြားမှုစနစ်ဖြင့်ရောင်းချသည်။ ၎င်းသည်၎င်းကိုဝယ်ယူသောအခါအလွန်ကြီးမားသောအားနည်းချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။
အောက်မှာကြည့်ပါ ဒီ OnePlus2၏အဓိကအင်္ဂါရပ်များနှင့်သတ်မှတ်ချက်များ;
မျက်နှာပြင် - Full HD resolution နှင့် Gorilla Glass protection ဖြင့် ၅.၅ လက်မ
ပရိုဆက်ဆာ - Qualcomm MSM8994 Snapdragon 810 octa-core (4 CortexA53 +4CortexA57) နှင့် Adreno 430 GPU နှင့်အတူ
ကင်မရာ - အရည်အသွေးကောင်းမွန်သောဓာတ်ပုံများကိုရိုက်ကူးရန်အတွက်လုပ်ဆောင်ချက်များစွာပါ ၀ င်သည့်အနောက်ဘက် ၁၃ Megapixel နှင့်ရှေ့ဖက် 13 Megapixel ။ ဗီဒီယိုများကို 5K resolution ဖြင့်မှတ်တမ်းတင်ရန်ခွင့်ပြုသည်
ဘက်ထရီ: 300 mAh Li-Po
စက်ပိုင်းဆိုင်ရာကိရိယာ - Android 5.1 Oxygen OS ဖြင့်အသုံးပြုနိုင်သည်
အခြားလုပ်ဆောင်ချက်များ: လက်ဗွေဖတ်စက်၊ USB Type-C၊ မှန်ဘီလူးတည်ငြိမ်မှု၊ လေဆာအာရုံစိုက်မှု၊ နှစ်ဆ LED မီး၊ Wi-Fi တိုက်ရိုက်၊ DLNA, 4G
ကျွန်ုပ်တို့သည်ကြီးမားသောစွမ်းအားရှိသောမိုဘိုင်းပစ္စည်းနှင့်ရင်ဆိုင်နေရသည်မှာသံသယဖြစ်စရာမလိုပါ။ ၎င်းသည်အောင်မြင်သောအပြီးသတ်မှုများလည်းရှိသည်။ သင်ထင်မြင်ချက်အရ၎င်းသည်ပရီမီယံဒီဇိုင်းမဟုတ်ဘဲ၎င်းသည်၎င်း၏စျေးနှုန်းကိုယူရိုအနည်းငယ်ဖြင့်တက်မည်ဟုဆိုလိုသည်။
သူ့ရဲ့တရားဝင်စျေးနှုန်းကတော့ ၁၉၉ ယူရိုဖြစ်ပါတယ် ၎င်း၏အခြေခံအကျဆုံးပုံစံတွင်၊ သင်အွန်လိုင်းစျေးဆိုင်များစွာတွင်ပြောဆိုခဲ့ဖူးသော်လည်းသင်စျေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့်သင်ရှာနိုင်သည်။
အပြီးသတ်ရန်သင်ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်သည့်ဤဆောင်းပါးကိုသင့်အားထားခဲ့ပါ ဖိတ်ကြားခြင်းမရှိဘဲ OnePlus2အသစ်ကိုမည်သည့်နေရာတွင်မည်သို့ဝယ်ယူနိုင်သည်.
Este Huawei Ascend Mate7၎င်းသည်စျေးကွက်တွင်တစ်နှစ်သက်တမ်းရှိမည်ဖြစ်သော်လည်း၎င်းသည်တရုတ်နိုင်ငံမှအပြည့်စုံဆုံးဆိပ်ကမ်းများအနက်တစ်ခုအဖြစ်ဆက်လက်တည်ရှိနေသည်။ သတ္တုဒီဇိုင်းနှင့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များနှင့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များပါ ၀ င်သောကျွန်ုပ်တို့သည်စမတ်ဖုန်းကြီးတစ်လုံးဖြစ်ပါက၎င်းသည်6လက်မထက်နည်းသောအရာနှင့်မျက်နှာပြင်ရှိကြောင်းမမေ့ပါနှင့်။
ကျနော်တို့ယခုပြန်လည်သုံးသပ်သွားနေကြသည် အဓိက Huawei Ascend Mate7၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များနှင့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များ;
မျက်နှာပြင် - ၆ လက်မ IPS LCD
ပရိုဆက်ဆာ: Mali-925 GPU နှင့်အတူ HiSilicon Kirin4octa-core (15GHz နှင့် 1.8xA4 တွင် 7GHz ရှိ 1.3xA7628)
ကင်မရာ - အနောက်ဘက်တွင် 13 megapixel နှင့်ရှေ့5megapixel ရှိသည်။
ဘက်ထရီ: 100 mAh Li-Ion
အခြားလုပ်ဆောင်ချက်များ: Wi-Fi Direct, 4G, Fingerprint reader
ဒီ Ascend Mate7စျေးနှုန်းဟာယူရို ၃၇၀ ဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍ သင်ဒီ terminal ကိုကိုင်ထားချင်တယ်ဆိုရင်တော့ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်သို့မဟုတ်ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်စောင့်ဆိုင်းသင့်သည်။ ၎င်းသည်ဒီပစ္စည်း၏စျေးနှုန်းကိုသိသိသာသာကျဆင်းစေမယ့် Mate 8 အသစ်ကိုတရား ၀ င်တင်ဆက်ဖို့အလွန်နီးကပ်နေပါတယ်။ ဒါ့အပြင် Mate 8 ကငါတို့ရဲ့အိတ်ကပ်တွေကိုမဖျက်ဆီးဘဲငါတို့ရဲ့စိတ်နှလုံးကိုသိမ်းပိုက်နိုင်တယ်။
သင်သည် Huawei Ascend Mate7ကို Amazon မှတစ်ဆင့် ၀ ယ်နိုင်သည် ဒီမှာ.
Xiaomi က Mi4
စောင့်နေတယ် Xiaomi က တရားဝင်ဖြစ်အောင် Mi5 ကိုတင်ပြပါ Mi4 ၎င်းသည်၎င်း၏အထင်ကရကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံတွင်ပြုလုပ်သောအကောင်းဆုံးမိုဘိုင်းပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင်စိတ် ၀ င်စားဖွယ်ကောင်းသောအင်္ဂါရပ်များနှင့်အထူးပြုချက်များပါ ၀ င်သည်။ ၎င်းသည်အလွန်အားကောင်းသောစမတ်ဖုန်းဖြစ်စေသည်။ အမြဲတမ်းအလင်း၊ မြန်။ လှပသော MIUI စိတ်ကြိုက်အလွှာနှင့်အတူမြင့်မားသောအဆင့်မြင့်ပစ္စည်းအနည်းငယ်သာရနိုင်သည်။
ဤရွေ့ကားအဓိကဖြစ်ကြသည် ဒီ Xiaomi Mi4 ၏အင်္ဂါရပ်များနှင့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များ;
မျက်နှာပြင် - ၅ လက်မ Full HD IPS + OGS LCD မျက်နှာပြင်
ပရိုဆက်ဆာ - Qualcomm MSM8974AC Snapdragon 801 quad-core (4 × 2.5GHz) နှင့် 330 GPU
ကင်မရာ - အနောက်ဘက်တွင် 13 megapixel နှင့်ရှေ့ 8 megapixel ရှိသည်
ဘက်ထရီ: 080 mAh
စက်ပိုင်းဆိုင်ရာကိရိယာ: Android 4.4.3 KitKat MIUI UI နှင့်အတူ
၎င်း၏စျေးနှုန်းသည်ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့စျေးကွက်သို့ရောက်ရှိခြင်းနှင့်ယင်းသည်အတော်အတန်လျှော့ချခြင်းဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ပြောနိုင်သည် ၂၆၅ နှင့် ၂၉၅ ယူရိုရှိသည်သင်ဝယ်သည့်နေရာပေါ် မူတည်၍ ၎င်းသည်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောစမတ်ဖုန်းဖြစ်စေသည့်စျေးနှုန်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ရယ်စရာကောင်းသောအဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်သည်။
သင်သည် Xiaomi Mi4 ကို Amazon မှတစ်ဆင့် ၀ ယ်နိုင်သည် ကုန်ပစ္စည်းမရှိပါ။.
Meizu မကြာသေးမီအချိန်များကအရာရာတိုင်းကိုကောင်းကောင်းလုပ်နေတယ်၊ ​​ဒါကရှင်းရှင်းလင်းလင်းဥပမာဖြစ်သည် Meizu MX5သူ၏အထင်ရှားဆုံးအချက်မှာ၎င်း၏ကင်မရာမှာမည်သည့်အရာမျှမပါ ၀ င်ဘဲ ၂၀.၇ မီဂါပစ်ဇယ်ထက် နည်း၍ ၎င်းသည်ကြီးမားသောနွေးထွေးမှုနှင့်ကြည်လင်ပြတ်သားမှု၏ဓာတ်ပုံများကိုရရှိရန်ဖြစ်နိုင်သည်။ သို့သော်၊ ကျန်သတ်မှတ်ချက်များသည်လုပ်ငန်းတာဝန်နှင့်မကိုက်ညီကြောင်းကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့်မထင်စေနှင့်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဈေးကွက်ရှိအဓိကထုတ်ကုန်များနှင့်အပြည့်အဝရပ်တည်နိုင်မည့် terminal တစ်ခုနှင့်ရင်ဆိုင်ရခြင်းဖြစ်သည်။
ဒီမှာငါတို့မင်းကိုပြတယ် ဒီ Meizu MX5 ၏အဓိကအင်္ဂါရပ်များနှင့်သတ်မှတ်ချက်များ;
မျက်နှာပြင် - ၅.၅ လက်မ FullHD AMOLED resolution နှင့် Gorilla Glass 5,5 ကာကွယ်မှုဖြင့်
ပရိုဆက်ဆာ - PowerVR G6796 MP4 GPU နှင့်အတူ MediaTek MTK2.2 octa-core (6200 × 4GHz)
ကင်မရာ - အနောက်ဘက်တွင် 20.7 megapixel နှင့်ရှေ့5megapixel ရှိသည်
ဘက်ထရီ - 150mAh Li-Ion
စက်ပိုင်းဆိုင်ရာကိရိယာ: Android ကိုအခြေခံပြီး Flyme OS 4.5
အခြားလုပ်ဆောင်ချက်များ: လက်ဗွေဖတ်စက်၊ လေဆာအာရုံစိုက်ခြင်း၊ နှစ်ဆ LED မီး၊ Wi-Fi တိုက်ရိုက်၊ DLNA, GLONASS, 4G
သူ၏စျေးနှုန်းသည်ကုမ္ပဏီ၏အခြားစမတ်ဖုန်းများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အနည်းငယ်မြင့်တက်ခဲ့သည်။ သို့သော်စျေးကွက်တွင်ရရှိနိုင်သည့်ဆိပ်ကမ်းအချို့နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်၎င်းသည်မြင့်မားလွန်းခြင်းမရှိသေးပေ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကွန်ယက်များ၏ကွန်ယက်တွင်မှန်ကန်စွာရှာဖွေပါက ကျွန်ုပ်တို့သည် Meizu MX5 ကို ၃၄၄ ယူရိုဖြင့် ၀ ယ်နိုင်သည်.
Amazon မှတစ်ဆင့် Meizu MX5 ကိုသင် ၀ ယ်နိုင်သည် ဒီမှာ.
Honor, Huawei ၏လက်အောက်ခံကုမ္ပဏီများသည်အရည်အသွေးနိမ့်သောထုတ်ကုန်များကိုဆက်လက်ရောင်းချနေဆဲဖြစ်ပြီးအံ့သြဖွယ်ကောင်းသောစျေးနှုန်းများဖြင့်အနည်းဆုံးအားဖြင့်၎င်းတို့သည်မည်မျှနိမ့်သည်ကိုတွေ့ရသည်။ ဤအမှုတစ်ခုမှာဖြစ်ပါတယ် ဂုဏ်အသရေ6Plus အား ၎င်းတွင်စိတ် ၀ င်စားဖွယ်ကောင်းသောအင်္ဂါရပ်များနှင့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များအပြင်အောင်မြင်သောဒီဇိုင်းတစ်ခုပါ ၀ င်သည်။ အနည်းဆုံးကျွန်ုပ်တို့သည်ပထမဆုံးမြင်တွေ့ရသည့် အချိန်မှစ၍ ကျွန်ုပ်တို့ကြည့်ရှု။ ထိတွေ့ခွင့်ရရှိခဲ့သည်။
ထို့အပြင်၊ Honor မိုဘိုင်းစက်ပစ္စည်းများမှာ၎င်းတို့အားစျေးကွက်ရှိအခြားတရုတ်ထုတ်ကုန်များထက်သာမန်နှင့်သာမန်နည်းလမ်းဖြင့်ရောင်းချခြင်း၏စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောလက္ခဏာများရှိသည်။
ဤရွေ့ကားအဓိကဖြစ်ကြသည် ဂုဏ်ပြု6Plus အားအင်္ဂါရပ်များနှင့်သတ်မှတ်ချက်များ;
မျက်နှာပြင် - ၅.၅ လက်မ IPS LCD
ပရိုဆက်ဆာ: Kirin 925, ၁.၃ GHz အမြန်နှုန်းဖြင့် ၄.၃ နှင့် ၄.၃ GHz တွင်
ကင်မရာ - အနောက်ဘက်တွင် 8-megapixel နှင့်ရှေ့ဖက် 8-megapixel ရှိသည်
ဘက်ထရီ: 3600 mAh
စက်ပိုင်းဆိုင်ရာကိရိယာ: Android 4.4.2 နှင့် EMUI
အခြားလုပ်ဆောင်ချက်များ: LTE, NFC, Bluetooth 4.0, Wi-Fi n, GPS, IR
ဈေးနှုန်းကယူရို ၄၀၀ ၀ န်းကျင်လောက်မကြီးပါဘူးအကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်အင်တာနက်ပေါ်တွင်ရှာဖွေ။ ရုန်းထွက်လျှင်၎င်းသည်ယူရိုငွေကိုချွေတာစဉ်က ၀ ယ်နိုင်သည်မှာသေချာသည်။
သင်သည်ဤ Honor6Plus အား Amazon မှတစ်ဆင့် ၀ ယ်နိုင်သည် ဒီမှာ.
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျနော်တို့ဖယ်ထုတ်ချင်ကြဘူး Xiaomi က Redmi 2, ထိုအရာရီရီရီသတ်မှတ်ချက်များမပါရှိသည့်စမတ်ဖုန်းတစ်ခုဖြစ်သည်, ဒါပေမယ့်သူကကျနော်တို့ကိုစတင်သုံးစွဲသည်နှင့်၎င်းသည်လုံလောက်ပါသည်။ အကယ်၍ သူသည်ထူးခြားသောမှတ်စုတစ်ခုကိုရရှိပါကဒီဇိုင်းတွင်ရှိသည်၊ အရောင်အမြောက်အမြားရွေးချယ်နိုင်သည်၊ ဈေးနှုန်းသည်ယူရို ၁၀၀ ကျော်ဖြင့် ၀ ယ်နိုင်သည်ဆိုလျှင်ဥရောပသို့ဆိုက်ရောက်ခြင်းနှင့်ဤ terminal ၏စျေးနှုန်းသည်ဖြစ်နိုင်သည်။ တရုတ်ထုတ်လုပ်သူနည်းနည်းတက်။
ဤရွေ့ကားအဓိကဖြစ်ကြသည် Xiaomi Redmi2၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များနှင့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များ;
မျက်နှာပြင် - HD IPS LCD resolution နှင့် ၇ လက်မနှင့် Gorilla Glass7ကာကွယ်မှုဖြင့်ပါ
ပရိုဆက်ဆာ: Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 quad-core (4 × 1.2GHz) နှင့် Adreno 306 GPU နှင့်
ကင်မရာ - အနောက်ဘက်တွင် 8 megapixel နှင့်ရှေ့5megapixel ရှိသည်
ဘက်ထရီ: 200 mAh Li-Po
စက်ပိုင်းဆိုင်ရာစနစ် - MIUI UI နှင့်အတူ 4.4 KitKat
အခြားလုပ်ဆောင်ချက်များ: GLONASS, Wi-Fi Direct, 4G
တရုတ်အတွက်ဒီ terminal ၏တရားဝင်စျေးနှုန်းကတော့ ၁၁၆.၅၀ ယူရိုဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့သလိုပဲစပိန်နှင့်အခြားနိုင်ငံများသို့ ၄ င်း၏လေယာဉ်ဆင်းသက်သည့်အချိန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏စျေးနှုန်းများသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကံမကောင်းအကြောင်းမလှစွာဖြစ်သွားနိုင်သည်။
ဒီစာရင်းထဲမှာစမတ်ဖုန်းအမြောက်အမြားရှိနေတာကိုကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းပြောခဲ့သလိုပဲ၊ ဒါပေမယ့်ဒီဟာတွေအားလုံးမှာမဝယ်နိုင်ပါ။ ဤထင်မြင်ချက်များသည်သင်ယနေ့စျေးကွက်တွင် ၀ ယ်ယူနိုင်သောအကောင်းဆုံးတရုတ်စမတ်ဖုန်းအချို့ဖြစ်သည်။ သို့သော်သင်၏အဆိုပြုချက်နှင့်အကြံပြုချက်များကိုကျွန်ုပ်တို့သိချင်ပါသည်။ ဤအတွက်သင်သည်မှတ်ချက်များအတွက်သီးသန့်နေရာသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့ရှိနေသောလူမှုရေးကွန်ယက်ကိုသုံးနိုင်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » တယ်လီဖုန်း » မိုဘိုင်း » ဤရွေ့ကားယနေ့သင်ဝယ်ယူနိုင်သောစျေးကွက်ရှိအကောင်းဆုံးတရုတ်စမတ်ဖုန်းအချို့ဖြစ်သည်
ဖြစ်နိုင်သည်မှာ Apple သည်တရုတ်နိုင်ငံမှကုမ္ပဏီများမဟုတ်သော်လည်း
Javier Benavides ဟုသူကပြောသည်
ဤဆိပ်ကမ်းများသည်တရုတ်ထုတ်လုပ်မှု၏အမြင့်ဆုံးအရည်အသွေးနှင့်စွမ်းအင်ဖြစ်ကြောင်းဆောင်းပါးကောင်းတစ်ပုဒ်လုံးတွင်ဖော်ပြထားသည်။ Elephon P8000 သည်အဆင့်မြင့်အင်္ဂါရပ်များပါသောစျေးနှုန်းနှင့်အတူထည့်သွင်းထားသည်။
Javier Benavides အားပြန်ကြားပါ
Elephone P8000 သည်ဤစာရင်းထဲသို့ခိုးဝင်ရန်ရွေးချယ်ခံရသူများထဲမှတစ် ဦး ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ ၎င်းသည်ဥပမာ ၁၀ ဖြစ်လျှင်၎င်းသည်သံသယဖြစ်စရာမလိုပါ။
အဆိုပါ oneplus2အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်: 0P
ဘက်ထရီသတ်မှတ်ချက်များအားလုံးမှားသည် ကျေးဇူးပြု၍ ပြန်လည်သုံးသပ်ပါ
Google Chrome ကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်မြန်အောင်လုပ်နိုင်တဲ့အချက် ၆ ချက်